Oppo A12 gafere asambodo Bluetooth na-egosi njirimara ya | Gam akporosis
Oppo Ọ na-arụ ọrụ ruo ogologo oge na mwepụta nke ezi ihe ngwọta kwesịrị ekwesị na mpaghara ekwentị ịkpọ ekwentị. Ntọala ndị a na-ebupụta na-ejigide usoro nke ịrụ ọrụ na ahịrị ntinye, iji kpuchie mkpa ndị nwere mkpa bụ Oppo Reno na Find X2
Companylọ ọrụ Dongguan chọrọ ịbawanye usoro nke smartphones dị n'etiti na mwepụta nke Oppo A12, ekwentị nke ugbua egosila ihe osise ya na nkọwa ya. Ngwaọrụ a ga-esonyere onye ọzọ ọhụrụ n'ezinụlọ amara dị ka Oppo A12e.
1 Oppo A12 ọmụma zuru ezu
2 Ekwentị abụọ ọzọ na-apụta
Oppo A12 ọmụma zuru ezu
Ebe ọ bụ na asambodo Bluetooth A12 na-enweta nọmba nlereanya CPH2083, ogwe nke ekwentị a bụ 6.22 sentimita asatọ na mkpebi HD +, Bluetooth 5.0 na Wi-Fi abụọ na-ejikọta na ngalaba njikọ. Onye ohuru a gha enwe batrị 4.230 mAh nke zuru iji zuru ubochi zuru ezu na ugwo.
Bụrụ nke Oppo A12 bụ ihe nhazi 2,0 GHz okpukpu asatọ, ya mere ọ na-egosi na ọ ga-abụ MediaTek's Helio P35 CPU, enweghị kpọmkwem RAM ma ọ bụ nchekwa data nchekwa. Ihupu gara aga kwuru banyere 3/4 GB nke Ram na 32/64 GB nke nchekwa.
N'ihe banyere igwefoto, A12 ga-agbanye na igwefoto 13-megapixel dị ka isi ihe mmetụta, nke abụọ bụ ihe mmetụta eserese onwe onye 5-megapixel na nke atọ bụ 2-megapixel omimi. Ngwurugwu omenala bụ ColorOS 6.1.2, yabụ ọ ga-abịa na gam akporo 9 Pie si na igbe ahụ.
Ekwentị abụọ ọzọ na-apụta
The Bluetooth SIG nchekwa data kwuru Abụọ smartphones ọhụrụ nke Oppo nwere akara ngosi CPH2067 na CPH2069, nke mbụ n’ime ha ga-abụ Oppo A72, ebe onye nke abụọ amaghị. Ihe omuma nke gha egosiputa na ha abua gha abia na gam akporo 10 na interface ColorOS 7.0.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Oppo A12 gafere asambodo Bluetooth na-egosi njirimara ya
Pixel 4a nke Google zuru oke tupu ekpughe ya